प्रचण्डको एक फोनले गर्यो कमाल, बागीको उम्मेदवारी फिर्ता
काठमाडौं । सत्ता गठबन्धनलाई यतिबेला बागी उम्मेदवारहरुले भयङ्कर ठूलो तनाव दिएको छ । बागीहरुलाई ब्याक गराउन शीर्ष नेताहरु नै हरसम्भव प्रयास गरिरहेका छन् । स्थानीय तह निर्वाचनको उम्मेदवारी फिर्ता लिने आज अन्तिम...
काठमाडौं। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच भेट भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको भेटमा स्थानीय तह निर्वाचनमा तालमेलको विषयमा छलफल भएको बताइएको छ। ‘केही नगर र...
बाघलाई स्यालले दियो सुझाव ?
काठमाडौं । यतिबेला सिट तालमेलको बिषयलाई लिएर सत्ता गठबन्धनभित्र रडाको मच्चिएको छ । मुख्यतः नेकपा फुटेपछि हातमा हात मिलाउदै अघि बढिरहेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालको सम्बन्ध सिट तालमेलको बिषयले...
पार्टीमा सबैलाई उचित भूमिका दिइन्छ : प्रचण्ड
काठमाडौं। नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पार्टीमा सहभागी हुने सबै नेता तथा कार्यकर्तालाई उचित जिम्मेवारी दिइने बताएका छन्। पार्टीका तर्फबाट अगाडि सारिएको जनपक्षीय एजेण्डलाई कार्यान्वयन गराउनका लागि जनताको घर दैलोमा...
काठमाडौं। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष ‘प्रचण्ड’ले एमसीसीबारे पार्टीमा स्थानीय तहको चुनावपछि थप छलफल हुने बताएका छन्। प्रचण्डले व्याख्यात्मक घोषणासहितको एमसीसी उचित सम्मानसहित कार्यान्वयनमा नगए पार्टी आन्दोलनमा जाने चेतावनीसमेत दिए। चुनावसम्म यो विषयलाई...
इतिहासमा मैले डरलाग्दो दबाब र धम्की झेलेको छु : प्रचण्ड
काठमाडौं। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पार्टीभित्र आफूले असाध्यै दुःख भोगेको बताएका छन्। शनिबार नुवाकोटको बिदुरमा स्व. नेता पोष्टबहादुर बोगटीको शालिक अनावरण कार्यक्रममा प्रचण्डले त्यसको संकेत गरेका हुन्। इतिहासमा डरलाग्दो...
पार्टी भित्र एमसीसीको विषयलाई लिएर आएको फरक मतको छलफल जेठ २० गते गर्ने प्रचण्डको प्रस्ताव
काठमाडौं २३ फागुन । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अमेरिकी परियोजना एमसीसीको विषयमा पार्टी भित्र उठेका प्रश्नको विषयमा जेठ २० गते छलफल गर्न भएका छन् । अध्यक्ष प्रचण्डले आज बसेको...
पछिल्ला दिनमा तनावमा छन् प्रचण्ड, कारण यस्तो
काठमाडौं । सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)को आइतबार बस्ने भनिएको केन्द्रीय समितिको बैठक एकाएक स्थगित भयो । आन्तरिक गृहकार्य नपुगेको भन्दै बैठक स्थगित गरेर सोमबार बस्ने सूचना माओवादीले जारी ग¥यो ।...
प्रचण्डसँग मेरो सम्बन्ध कठिन मोडमा पुग्यो : नारायणकाजी
काठमाडौं २० फागुन । नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले आफुलाई अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नै पार्टी छोड्नु भनेको बताएका छन् । आज शुक्रबार देखि सुरु भएको पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकलाई सम्बोधन...